Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှလိင်ဘဝကိုကယ်တင်ခြင်း၊ Dalal Akoury MD (2016) - Your Brain On Porn
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလာဒေခ်လိင်အသက်, Dalal Akoury MD (2016)
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလိင်ဘဝကိုကယ်တင်ဖို့ (ဒီဇင်ဘာလ 9, 2016 အားဖြင့် carrenak)
ဤသည် Anti-onanistic ဝါဒဖြန့်ကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ, မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များလွန်း masturbating အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ပိုဆိုးလာသောစွဲလမ်းတစ်တော်တော်လေးစံပုံစံကြောင်းပြောကြသည်။ porn အကဲခတ်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ၏ကြီးမားသောရေလွှမ်းမိုးဖန်တီးပေးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, တစ်ချိန်ကအလွန်အထိခိုက်မခံသော receptors လျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်လာများနှင့်ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးပု dopamine receptors လှုံ့ဆော်ဖို့လုံလောက်တဲ့ dopamine ထုတ်လုပ်ရန်မထားဘူး။ တနည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ပို porn, သငျသညျကိုနူးညံစိုက်ထူရနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းခက်ခဲပြီးပိုဂရပ်ဖစ် porn ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ဆက်လက်လြှငျ, ယောက်ျားတစ်ဦးစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှာတှေ့နိုငျသညျမြားစှာလျော့နည်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ပျော်မွေ့နှင့်ဤထုံးစံ၌ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလိင်ဘဝကိုကယ်တင်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်လာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန် Dalal Akoury ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် AWAREmed ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်စင်တာမှကျွမ်းကျင်သူများဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှတပါး, ကသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, ထိုကထပ်မံပြောဆို, porn-သွေးဆောင် ED ဇီဝနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းပြဿနာတစ်ခုသို့ဆိုင်တွေမှာနောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်-စိုးရိမ်ပူပန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖန်တီးနိုင်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာစိတ်တို, အိပ်စက်မှုလျော့ကျ, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်တ feeling နဲ့တူအစစ်အမှန် Self-ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ရန်တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ပေမည်။ တဦးတည်းလည်းမကြာခဏ masturbating ကြောင်းညွှန်ပြမတိကျတဲ့အရေအတွက်ကလည်းမရှိသောကွောငျ့ဤသည်အလွယ်တကူမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးဆုံးရှုံးဖို့တစျခုတကားနိုငျသညျ။
ကောင်းမွန်သောသတင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု AWAREmed ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်စင်တာမှာကု သ. ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို Element တစ်ခုရဲ့အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်။ ပညာရှင်ပီသစွာ, ဆရာဝန် Akoury အများဆုံးယောက်ျားမကြာခဏစွဲ၏ sensitivity ကိုပေါ် မူတည်. ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာဘို့ကြာရှည်ရသောပြားချပ်ချပ်လိုင်းလိင်စိတ်ကိုတွေ့ကြုံခံစား, ထိုမှတ်ပုံတင်သည်။ ဒါကြောင့်ယာယီဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာနှိုးဆော်သံမြှင့်မထားသင့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီကု သ. ကြောင့်နှင့်အညီ, အကူအညီတောင်းဆရာဝန် Akoury တောင်းဆို, သင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တင်သည့်များအတွက်အလွန်စံပြဖြစ်လိမ့်မည်။
တဦးတည်းလိင်စွဲဖြစ်လာသည့်အခါလိင်အားလုံးပါဝင်ပါတီများမှပျော်စရာနှင့်အပျြောမှေ့စဖြစ်လို့ယူဆတယ်ကြောင့်, ပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခြင်းမှတပါးလည်းတစ်ခုစွဲကျွမ်းကျင်သူသူသည်စွဲအမှန်တကယ်လိင်ပျော်မွေ့မသင့်အသက်တာ၌အောက်ပါအပြုအမူတွေကိုမဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုမြင်နေလျှင်ထိုကွောငျ့, ထို့နောက်သင်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှအကူအညီကိုရှာရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဆရာဝန် Akoury သူသငျသညျအသီးသီး ED နှင့်စွဲသင့်ရဲ့အမွှာပြဿနာများကိုကျော်လွှားကူညီပေးပါမည်။ အောက်ပါတဲ့အခါငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ၎င်းအပြုအမူတွေတချို့ရှိနေပါတယ်;
တပြိုင်နက်တည်းသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ sequential ရေးရာ
လိင်အဘို့အမိတ်ဖက် objectification / ဝယ်လိုအား
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း / စောင့်အရှောက်များအသုံးပြုခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြင်းကိုမနှစ်သက် / anorexia
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ paraphilia ရဲ့ (ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွများအတွက်လိုအပ်ချက်) နှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့်လိင်ထိုးစစ်အပြုအမူ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဆောင်းပါးကတဆင့်သွားပြီပြီးမှ, သငျသညျယခုသင်လိင်စွဲနေတာဟုတ်မဟုတ်ကိုပြောပြသို့မဟုတ်သင်စိုက်ထူပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနှင့်သင့်လိင်ဘဝယိုယွင်းနေသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသည်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်သင်၏အသက်တာ၌ဤအခွအေနေအထဲကထောက်ပြပြီဆိုရင်, ယနေ့ငါရက်ချိန်းများအတွက်စာအုပ်ဆိုင်မှဆရာဝန် Akoury ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပညာရှင်ပီသစွာကုသမှုကိုရှာသငျသညျအားပေးချင်တယ်။